किन मारिए राजा वीरेन्द्र ? « Naya Page
प्रकाशित मिति : 12 January, 2018 8:36 am
काठमाडाैं : राजा वीरेन्द्रको सम्झनाले धेरै नेपालीको हृदय द्रबित हुन्छ । मुटु झङ्कृत भएझैँ लाग्छ र नयन रसाउन थाल्छन् । नेपाल र नेपालीलाई शान्त, समृद्ध, सुखी र खुसी राख्न चाहने राजा वीरेन्द्रको जन्मदिन पुस १४ गते । त्यसैले, उनीप्रति श्रद्धा राख्ने सबैले यो दिनलाई महत्वपूर्ण मान्ने गर्छन् । र, बारम्बार प्रश्न गर्छन्, किन मारिए राजा वीरेन्द्र ? कसले माृयो उनलाई ? अाजकाे नागरिक दैनिकमा युवराज गौतम गाैतम लेखेका छन् ।
श्री ५ वीरेन्द्रको शुभराज्याभिषेक समारोहमा अमेरिका, ब्रिटेन, अस्टे«लिया, चीन, भारत, इजरायल, इटाली, अस्ट्रिया, अल्जेरिया, उत्तर र दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन्डोनेसिया, कुवेत, क्यानडा, चिली, इराक, जर्मनी ९पूर्व र पश्चिम०, जापान, जोर्डन, टर्की, डेनमार्क, नर्वे, पोल्यान्ड, सोभियत संघ, इरान र न्युजिल्यान्डका प्रतिनिधि उपस्थित भए । यस्तै, फ्रान्स, बंगलादेश, बर्मा, बुल्गेरिया, भुटान, मंगोलिया, मलेसिया, इजिप्ट, मोरक्को, युगोस्लाभिया, ग्रीस, रोमानिया, लाओस् र लेवनानका प्रतिनिधि आएका थिए । यस्तै, श्रीलंका, सिंगापुर, स्पेन, थाइल्यान्ड, स्वीडेन, स्वीट्जरल्यान्ड, हंगेरी र संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि पनि समारोहमा सामेल भएका थिए ।
इतिहास साक्षी छ, ठूल्ठूला घटना–दुर्घटनाबाट पाठ सिकेर धेरै राष्ट्रले अस्तित्वको रक्षा गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाएका छन् । राष्ट्रिय एकताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रहितको संवद्र्धन–सम्पोषण गरेका छन् । स्पेन, फ्रान्स र अस्ट्रियाले पटकपटक थिचोमिचो गरेपछि राष्ट्रलाई शक्तिशाली, निःस्वार्थी र विवेकशील नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने इटालीका जनतामा चेतना आयो । मेजिनीकै समयमा राजा चाल्र्स अल्बर्टले इटालीलाई स्वाधीन तुल्याउन अस्ट्रियासँग युद्ध गरेका थिए । कस्टोजाको युद्धमा इटाली परास्त भयो । गणतन्त्रवादी नेता मेजिनीले राजालाई सल्लाह दिए, “म सहज स्थितिमा राजातन्त्रको समर्थन नगर्ने मान्छे तर आज राष्ट्र गम्भीर संकटमा छ । त्यसैले म राष्ट्र बचाउन तपाईंलाई (राजालाई) जुनसुकै मद्दत गर्न तयार छु ।” नोभोराको युद्धमा पनि राष्ट्र परास्त भएपछि राजाले छोरा भिक्टर इमान्युअललाई गद्दी सुम्पे । उदार हृदयका भिक्टरले गणतन्त्रवादी नेता मेजिनीसँग मिलेर राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने योजना बनाए । राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बचाउन मेलमिलापको नीति लिए । मेजिनीको सल्लाहमा प्रबल राष्ट्रवादी नेता क्याभरलाई राजाले प्रधानमन्त्री बनाए । उनले इटालीका जनतामा राष्ट्रवादको अपूर्व लहर ल्याए । क्याभरले भने ‘इतालिया फारा दा से’ ९इटाली आफ्नो रक्षा आफैँ गर्छ ।० विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध यो खुला चेतावनी र सन्देश थियो ।
२०४३ सालमा प्रधानमन्त्री भएका मरीचमानसिंह श्रेष्ठ राजा वीरेन्द्रसँग खुलेर छलफल गर्थे भन्ने कुरा उनका अन्तर्वार्ता र उनीसँगको कुराकानीका प्रसंगमा छर्लंग भएका छन् । २०४५ सालमा सेनाले चीनबाट एन्टी एयरक्राफ्ट गन लगायतका सामग्री झिकाउँदा भारतले १५ महिनासम्म नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी ग¥यो । भारतका विदेशसचिव एस। के। सिंह ६ बुँदे प्रस्ताव लिएर आए । अब भारतसँग मात्र हतियार किन्नुपर्ने, भारतको स्वीकृतिबेगर कुनै राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न नपाइने, व्यापार र पारवहनमा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने आदि विषय त्यसमा उल्लेख थियो । राजा वीरेन्द्रले सो प्रस्तावबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान खरानी हुन्छ भन्दै ठाडै अस्वीकार गरिदिए । त्यसपछि भारतले दिल्लीका नेता एवं पत्रकारहरूको हुल पठाएर “राजा वीरेन्द्रको एकाधिकार र निरंकुशता तोडेर दलहरूका हातमा शासन व्यवस्था ल्याउनुपर्छ” भन्दै २०४६ सालको आन्दोलन सुरु गरायो । चन्द्रशेखर, हरकिशनसिंह सुरजित, सुब्रमव्यम् स्वामी, एम।जे। अकबरलगायतका नेताले राजा वीरेन्द्र ‘तानाशाह’ हुन् भन्दा नेपालका कैयन् नेताले थप्पडी बजाए । बिपीका जेठा छोरा प्रकाश कोइरालादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यसमेत धेरै राष्ट्रवादीहरू २०४६ सालको आन्दोलनका पक्षमा थिएनन् ।